Tilmaanta AZ si loo nadiifiyo Springs Elementary | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Nadiifi Liisaska isha
Qoysaska sharafta leh ee cadcad
Wadajir ahaan, carruurta, shaqaalaha iyo waalidiinta ayaa ka dhigaya 'Springs' meel aad u wanaagsan oo wax lagu baro oo wax lagu barto. Hadafkayagu waa inaan ka caawino cunug walba inuu gaaro himilooyinkiisa ama kartideeda Caawinaadaada, waan sameyn karnaa!
Wada-xiriirka furan waa mid muhiim u ah gaaridda yoolkan. Haddii aad qabtid wax su'aal ah, faallo ama walaac ku saabsan dugsiga, fadlan soo wac macallinka cunuggaaga ama aniga. Had iyo jeer waan ku faraxsanahay in aannu kaa maqalno.
Waxaan rajeynaynaa in hagaha waalidku uu kaaga jawaabi doono inta badan su'aalahaaga ku saabsan nolosha maalinlaha ah ee 'Springs'.
Waad ku mahadsantahay inaad ku aamintey cunugaaga inuu nadiifiyo Iskuulka Springs!
Soo degso Tilmaanta AZ
Waxaan dheeraynay waqtigeenna imaatinka si aan u habeynno taraafikada inta ardaygu imanayo. Waad geynkartaa ardaygaaga laga bilaabo 8:15 am Waxaan kormeer ku bixin doonnaa ardayda goobta u ololeyneysa ilaa ardayda loo oggolaado inay galaan fasalkooda 8:30 am Dugsiga wuxuu bilaabmaa 8:40 am In kasta oo macallimiintu goor hore yimaadaan, waqtigooda waxaa lagu qaataa kulamada kooxda, shirarka waalidiinta iyo diyaarinta casharka. Hadaad ubaahantahay inaad ilmahaaga iskoolka ka durugto saacadu markay tahay 8:15 subaxnimo, waxaad ubaahantahay inaad wacdid Naadiyada sahmiyaha si aad uga hesho macluumaad kusaabsan xanaanada caruurta saacadaha iskuulka kahor iyo kadib.
Macallinka farshaxanka ayaa la kulma ardayda K-5 hal jeer 5-maalmood oo wareeg ah 50 casharro daqiiqadood ah. Ardayda barnaamijka loo yaqaan 'Clear Springs' waxaa lagu barayaa farshaxanka iyada oo loo marayo barnaamijka 'Discovery Art Cur Currency' oo salka ku haya falsafada farshaxanka ku saleysan Farshaxanka (DBAE). Habka DBAE wuxuu u soo bandhigayaa carruurta afar edbin kuwaas oo ka dhigaya waayo-aragnimo farshaxan oo sifiican u urursan, oo xiisa badan. Tababaradaani waa: Taariikhda Farshaxanka, Cilmiga Farshaxanka, suuxinta iyo Soosaarka Farshaxanka. Ardayda loo yaqaan '' Springs 'waxay sidoo kale sahamiyaan warbaahinta badan iyo aagagga waxsoosaarka. Kuwaas waxaa ka mid ah; dhoobada, rinjiga, isku-darka, daabacaadda, farshaxanka warbaahinta badan, dhuxusha, Cray-Pas iyo farshaxanka dharka.
Qayb ka mid ah mas'uuliyadda ilmaha ee ardaygu waa inuu tago dugsiga markasta oo isagu ama iyadu caafimaad qabaan. Ilmahaaga dartiis awgeed, fadlan jadwalka safarada qoyska iyo ballamaha caafimaad ee ka baxsan waqtiga iskuulka haddii ay suurtagal tahay. Maamulaha ayaa la xiriiri doona waalidiinta marka maqnaanshuhu noqdo mid xad dhaaf ah.
WARBIXINTA CUDURADA ARDAYGA
Haddii ilmahaagu ka maqanyahay dugsiga, fadlan qaado tillaabooyinka soo socda.
Ka wac khadka taleefanka 24 saac ee 952-401-6954, kahor bilowga iskuulka. Soo sheeg magaca cunugga, fasalka, magaca macallinka, sababta maqnaanshaha iyo dhererka maqnaanshaha. Wadashaqeyntaadu waxay naga caawineysaa inaan hubino amniga iyo halka ay ku sugan yihiin caruurteena.
Haddii aan kaa maqalno oo aanu ilmahaagu maqnayn, kalkaaliyeheenna caafimaad ama para ayaa isku dayi doona inay kugu soo wacaan gurigaaga ama shaqada. Waxay ka tagi kartaa fariin.
Haddii aad qorsheynaysid waxqabad qoys iyo fasax, fadlan buuxi “Codsiga Ogolaanshaha hore ee Cudurdaarka Cudurdaarka Cudurdaarka leh ee Firfircoonaanta Qoyska / Fasaxyada” oo laga heli karo xafiiska dugsiga una gudbi maamulaha ka hor dhacdada, si aad u heysato ilaa iskucelcelis 5 sanadood ah oo loo oggol yahay maqnaansho cudurdaar leh.
Haddii xaalad deg-deg ah oo qoyska oo ku-meel-gaadh ah ay dhacdo oo aadan u diyaarin karin oggolaansho hore, maqnaanshaha waa cudur-daar la'aan laakiin ma aha inay keento warbixin maqnaansho haddii ilmuhu si joogto ah u aado dugsiga.
Haddii ardaygu yimaado dugsiga ka dib 8:40 aroornimo, ardayga waxaa loo calaamadeeyay daahid subaxnimo waana inuu joogsadaa xafiiska si uu u siiyo kaarka fasalka.
Iskuulada waxaa laga rabaa inay kusii hayaan imaatinka maalinlaha dhamaan ardayda iyo diiwaanada imaashada saacadeed ee ardayda dugsiga sare. Xogtan waxaa loo gudbiyaa gobolka iyada oo qayb ka ah sharciga Wax Barashada Waajibka ah.
Iskuulada waxaa looga baahan yahay inay waalidiinta ogeysiiyaan waxa maqnaanshaha cudurdaarka leh iyo maqnaanshaha aan cudurdaar laheyn. Sharciga ayaa tilmaamay in maqnaanshaha cudurdaarka leh ay ka mid yihiin sababao caafimaad iyo diimeed iyo sidoo kale dhameystirka shuruudaha Qalinjabinta.
Iskuulada waxaa looga baahan yahay inay u soo sheegaan dayacaada ubadka iyo maqnaanshaha wakaaladaha dowladda ee ardayda leh 9 ama ka badan maqnaansho aan cudurdaar lahayn sanadkiiba.
Waxaan hiigsaneynaa inaan si iskaashi leh ula shaqeyno qoysaska si loo diiwaangaliyo sababaha maqnaanshaha ardayga. Waxaan ognahay inay qoysasku qiimeeyaan sababaha kale ee ka baxsan jirada iyo xaaladaha degdegga ah, oo ay ku jiraan fasaxyada iyo dabaaldegyada. Si taas loo gaaro, waxaan sameynay hanaan lagu oggolaanayo illaa iyo shan maalmood oo howlaha qoyska / fasaxyada in loo diiwaangaliyo maqnaansho cudurdaar leh haddii waalidka / mas'uulka uu buuxiyo foomka dugsiga ee codsanaya oggolaanshaha maamulaha hore maqnaanshaha noocaas ah.
Band iyo Orchestra
Bas / Gaadiid
Ikhtiyaariyada xulashada ee Qorshaha Fursadaha Furan ee Diiwaangelinta / Xulashada Waalidka
Band waa khibrad muusig oo ikhtiyaar u ah ardayda fasalka shanaad iyo kooxda heesaha ayaa ikhtiyaar u ah ardayda fasallada 4aad iyo 5aad. Ardaydu waxay helaan cashar 20-daqiiqo ah hal mar shantii maalmood ee iskuulka. Waqtiga casharku wuxuu dhacayaa inta lagu jiro maalinta iskuulka iyadoo loo eegayo qaab wareejin ah. Jadwalkan wareegga ah darteed, ardayda kama maqnaanayaan isla 20 daqiiqadood inay ka maqnaadaan fasalkooda in kabadan laba jeer rubuc. Waqtiyada casharka waxaa loo diraa waalidiinta waxaana lagu dhajiyaa shaxda qolka bandhiga / orchestra iyo sidoo kale fasal kasta 4aad iyo 5aad si loo xasuusiyo ardayda waqtigooda casharka iyo maalmahooda seddex biloodlaha oo dhan.
Waa maxay sheekada ku taal gambaleelka Dardar? Dawankii ayaa wacay carruurtii iskuulka asalka ahaa ee la dhisay 1867. Waxay ku taal meel kasta oo loo yaqaan 'County Road 101', oo ah halka bakhaarka degmada hadda ku yaal. Iskuulkayaga hada jira waxaa la dhisay 1958. Si loogu dabaaldego qarankeena sanadki 1976, koox waalidiinta iyo ardayda ayaa dib u habeeyay gambaleelka. Hay'addayada 'PTO' waxay shaqaalaysiisay Wilbert Marquardt si ay u dhisto munaaradda dawanka kaas oo gambaleelku hadda ku yaallo Ka eeg gambaleelka barxaddayada.
PTO wuxuu aqoonsan yahay dhamaan maalmaha dhalashada ardayga buugga dhalashada. Maalmaha dhalashada xagaaga waxaa la aqoonsan yahay dhamaadka sanad dugsiyeedka. Iyada oo la raacayo daaweyn, ardaydu waxay keeni karaan shay aan cunno ahayn si ay ula wadaagaan fasalka, ama badal ahaan, buug ama ciyaar roobaadka ayaa lagu deeqi karaa fasalka. Fadlan, wax dawooyin ah looma oggola maalmaha dhalashada.
Lacag ayaa laga yaabaa in lagu qiimeeyo safarada garoonka si loogu daboolo gaadiidka baska ama kharashyada kale. Haddii cunuggu ka maqnaado maalinta safarka, waxaa suuragal ah inaanan soo celin karin lacagta, maxaa yeelay qiimaha baska arday kasta wuxuu ku saleysan yahay tirada carruurta fasalka ku jira. PTO-ga ayaa kafaala qaada hal safar oo heer fasal sanadkii ah.
Cunugna waa inaanu seexin safar uu ugu maqnaa duruufo dhaqaale awgeed. Fadlan wac maamulaha ama adeegaha bulshada haddii qiimaha safarka duulimaadku uu qoyskaaga ku hayo dhibaato. Waxaan haynaa deeq waxbarasho.
Ka dhigitaanka ardayga ee raacitaanka baska inuu yahay mid nabdoon oo lagu farxo waa mas'uuliyad aan si dhab ah u qaadno. Casharada Badbaadada Baska waxaa loo habeeyey bilowga sanad dugsiyeedka. Ardayda waxaa la baraa nidaamka nabadgeliyada baska iyo cawaaqibka ka yimaada jabinta xeerarka baska. Maamulaha gaadiidku sidoo kale wuxuu dugsiga ka sameeyaa tababaro lagu bixinayo baska. La socodka fiidiyowga iyo maqalka ayaa shaqeynaya bas kasta. Waa xaqqa darawalka inuu ku meeleeyo kursi ardayga haddii loo baahdo. Haduu ardaygu seeggo baska gurigiisa ku taga, shaqaalaha xafiiska ayaa waalidiinta ugu yeeri doona gaadiid ama maamulaha ayaa geyn doona ilmaha guriga. Basaska qaar baa leh. Sababo nabadgelyo awgood ma cusbooneysiin basaskayada. Fadlan ka hubi xafiiska dugsiga ka hor intaadan u dirin koox xafladeed dhalasho ama koox indha-indheeye bas. Tani waxay hubin doontaa in kuraasida la heli karo.
SIYAASADDA AMMAANKA GAADIIDKA ARDAYGA
Nidaamka Gudiga iskuulka 709 wuxuu qorayaa in falalka qaarkood ama anshaxa ardayda ay si gaar ah loo mamnuuco inta ardayda lagu qaadayo basaska degmada. Waalidka iyo ardaydu waa inay bartaan sharciyadaan. Way fiicnaan laheyd haddii waalidku xasuusiyo carruurtooda qawaaniinta soo socota, inay caymis geliyaan baabuur fuul oo nabdoon iyo qaadista dhammaan carruurteenna.
Diidmo la'aan ama anshax xumo xagga darawalka gaariga.
Dhaqdhaqaaqa intuu gaariga socdo.
Ku dhejisid madax, gacmaha ama qeyb jirka ka mid ah, dariishadda.
Waxyaabaha ka tuura daaqadaha.
Hadal aan caadi ahayn ama qaylo aan caadi ahayn.
Ku shaqeynta gaariga ama wixii qalab ah.
Isticmaalka waxyaabaha ka sameysan tubaakada iyo / ama walxaha xakameysan (aalkolo, daroogo).
Cambaareynta ama ku lug lahaanshaha dagaalka baska ama gaariga.
Isticmaalka luqadda aan habboonayn.
Carqaladeyn rakaabka rakaabka ah.
Adeegsiga bixitaanka degdegga ah xaaladaha aan degdegga ahayn.
Ku xadgudubka arday kale ama qof weyn oo saaran baska.
Ficil kasta oo kale oo u muuqan kara inuu mamnuucayo ama saameyn ku yeelan karo nidaamka garsoorka iyo habsami u socodka ardayda waa ku xadgudubka sharciga sharciga ama sharciga degmada. Darawalada basaska ayaa xiriir la leh maamulaha wixii ku saabsan dabeecada baska.
Haddii darawalka uu sheego in cunug uu si xun u dhaqmo baska, kuwanu waa natiijooyinka:
Warbixinta koowaad: Haddii dhibaatadu ay yar tahay, cunugga waxaa la siiyaa digniin waaliddiintana waxaa lagu ogeysiiyaa boostada. Haddii dhibaatadu culus tahay, maamulaha ayaa wici doona waalidka ilmahana waxaa laga yaabaa in iskuulka laga joojiyo.
Warbixinta Labaad: Ardayga looma ogolaan doono baska illaa 5 maalmood.
Warbixinta seddexaad: ardayga looma ogolaanayo inuu raaco baska illaa 20 maalmood.
Warbixinta afraad: Ardayga looma ogolaanayo inuu raaco baska inta ka hartay sanad dugsiyeedka.
Ardayda ka diiwaangashan furan ama ku jira Qorshaha Xulashada Waalidka waxay u keeni karaan ilmahooda boosteejada baska ugu dhow ee marinka baska Clear Springs. Bedel ahaan, diiwaangelinta furan iyo Qorshaha Xulashada Waalidka ee qoysasku waxay u kaxayn karaan ilmahooda dugsiga oo ay ka soo qaadan karaan dhamaadka maalinta (Fiiri DIIWAANKA / JOOJI DADKA).
Haddii ilmahaagu ku tagayo bas kale, waa inaad warqad u dirtaa dugsiga kaasoo sheegaya magaca ardayga, ardayga ay u raacayaan guriga, lambarka baska iyo joogsiga baska. Cunugaada ha siiyo ogeysiiskan macallinkooda. Macallinka ayaa warqad ugu gudbiya xafiiska kaararka baskana waa la qoraa oo macallimiinta loo geeyaa waqtiga qadada.
Deegaanka Kiimikada iyo Tubaakada La'aanta
Iskuullada Minnetonka ee Degmada 276 ayaa rumeysan inay tahay in loo helo bey'ad aan laheyn tubaako dhamaan ardayda, shaqaalaha iyo maamuleyaasha. Jawiga aan lahayn tubaakada ee degmada Iskuul Minnetonka ah waa in lagu dabaqaa dhamaan dhismayaasha iskuulka iyo garoonkiisa, kiraynaya ama haysta, iyo dhamaan iskuulku leeyahay, kiraystay, ama galey qandaraas ku leh. Intaa waxaa dheer, nashaadaadyada dugsiga maalgaliyay sida safarada dibada, meelkasta oo ay ka dhacaan, waxay ka kooban yihiin siyaasada sigaarka tobaakada. Daroogada iyo aalkolada looma oggola bannaanka dugsiga ama gudaha dhismaha waqti kasta. Xadgudubyada ayaa loo sheegi doonaa booliska.
Wadashaqayn furan, oo caafimaad leh oo udhaxeysa qoysaska iyo iskuulada ayaa ah midda ugu awooda badan ee aan kubadhan karno nolosha ardayda. Kulamada, Habeenka Manhajka, kaararka warbixinta iyo joornaalada waa qaar ka mid ah qaababka rasmiga ah ee aad wax uga baratid khibradaha dugsiga ilmahaaga.
Siyaabo aan rasmi ahayn ayaa sidoo kale muhiim ah.
Waqti gooni ah u qoro maalin kasta si aad uga maqasho waxa ilmahaagu ka bartay dugsiga.
Ka hadal dhacdooyinka maalinta, saaxiibtinimada iyo dareennada.
Ka eeg firaaqeyaasha Peachjar .
Ku tabaruc fasalka fasalkaaga ama mashaariicda dugsiga, oo firfircoonow PTO iyo shirarka waalidiinta.
Xiriir furan la yeelo macallinka cunuggaaga sannadka oo idil, ha ahaato emayl, qoraal qoraal ah ama taleefan wicitaan ah.
Waxaan rabnaa inaan ku maqalno! Mar alla markaad dareento baahida, kala xiriir cunugaaga macalinkiisa taleefanka ama emaylka. Haddii aad su'aalo qabtid, weydii. Haddii aad walaac qabtid, raac. Hadaad ku faraxsantahay horumarka ilmahaagu sameeyo, muuji mahadsanid
Ka hel macluumaadka ku saabsan xiriirka shaqaalaha ee Tusahayada Shaqaalaha .
Xilliga deyrta iyo guga hore, iskuulka waa laga ceyrin doonaa si uu u siiyo waqti macalin kasta uu la kulmo waalidiinta / mas'uuliyiinta si looga wada hadlo waxqabadka ardayga iyo horumarka. Shirarka waxaa loo qorsheeyay maalmo iyo galabba, si looga dhigo mid ku habboon qof kasta. Foomka iska diiwaangelinta ilmo kasta wuxuu tagi doonaa guriga dhammaadka Sibtember. Haddii ay dhacdo shir la seegay, waalidku waxay u baahan yihiin inay ballan la qabsadaan macalinka.
Ahmiyada shirka deyrta ayaa ah in la bixiyo talo ku saabsan ardayga iyo in la dejiyo yoolalka sanadka. Guga, yoolalkaas dib loo eegay waa horumar la wadaagayo, marka lagu daro wixii kale ee fikrad ah ee la xiriira.
Macallimiintu waxay sugaan shirar dhawr arrimood awgood:
Waxaan rajeyneynaa inaan kula kulanno.
Waxaan rabnaa inaan wadaagno indha indheynta iyo macluumaadka ku saabsan cunuggaaga.
Waxaan u baahan nahay inaan maqalno wixii walwal ah oo aad qabto.
Waxaan rabnaa inaan kula shaqeyno si aan uga caawino cunuggaaga inuu helo sannad dugsiyeed guul leh.
Degmadda Iskuulka Minnetonka, waalidiinta iyo macallimiintu waxay rajo wanaagsan ka qabaan ardayda oo dhan. Dhamaan macalimiinta waxaa loo tababaray inay isticmaalaan agabyada ay ansaxisay degmadu. Waxaa sidoo kale lagu tababbaray dhaqamada ugu wanaagsan waxayna yaqaanaan sida loogu oggolaado dabacsanaan si loo hubiyo in dhammaan ardayda ay gaaraan heerkooda ugu sarreeya. Heerka dugsiga hoose ardayda waxaa lagu baraa farshaxanka luqadda (akhriska, naxwaha, qorista, higgaadda, qorista gacanta, hadalka iyo dhageysiga), xisaabta, sayniska, cilmiga bulshada, caafimaadka, jirdhiska, farshaxanka, iyo muusikada. Macallimiintu waxay u adeegsadaan teknolojiyad si ay u dardargeliyaan barashada iyo xirfadaha dhammaan ardayda.
Farshaxanka Luuqadda: Houghton-Mifflin iyo Ahaan Qoraa
Daraasadaha Bulshada: Noolaanshaha Taariikhda!
Xisaabta: Xisaabta Maalin kasta iyo Xisaabta Diiradda
Qoraalka gacanta: Zaner-Bloser
Caafimaadka: Dukaanka Jirka Weyn
Muusiga: Spotlight On Music oo uu qoray MacMillan / McGraw-Hill
Farshaxanka: Farshaxanka ku saleysan Waxbarashada Farshaxanka
Sayniska: Xirmooyinka gacanta lagu qaato (ama Foss iyo mid degmada loogu talagalay)
Jimicsiga jirka: Manhajka loogu talagalay degmada
Nuqul buug kasta oo buug ah ayaa laga heli karaa maktabadda dugsiga / xarunta warbaahinta si loo baaro loona hubiyo waalidiinta.
Qalabka waxaa lagu qeexay Nidaamka Gudiga Iskuulka M-4 sida wax daabacan ama shey aan la daabacan oo ay ka kooban yihiin wax barasho ama howl loo adeegsado ujeedo waxbarasho / waxbarasho. Waxyaabaha loo baahan yahay waa inay ahaadaan manhajka ku habboon, waxyaabaha ku habboon, iyo da'da ku habboon. Ku habboonaanta waxbarasho ee baahiyaha ardayda ayaa ah qodobka ugu weyn ee xulashada ilaha.
Macalinka waxaa la xisaabtamaya fahamka waxa ku jira iyo sida loo adeegsado agabkan manhajka. Qalabka xarunta warbaahinta waxaa lagu xushay iyada oo lagu saleynayo dib-u-eegista, joornaalada xirfadaha leh iyo talooyinka xirfadeed; sidaas darteed, xirfad yaqaanka maxalliga ah ayaa laga yaabaa ama ma ogaan karo dhammaan waxyaabaha ka kooban agab gaar ah. Cabashooyinka ku saabsan agabyada loo adeegsado Iskuullada Minnetonka waxaa looga hadli doonaa iyadoo la raacayo nidaamyada laga helo Nidaamyada Maamulka iyo Nidaamka Habraaca.
Habeennada Manhajka waxaa loogu talagalay waalidiinta inay soo booqdaan fasalka carruurtooda, la kulmaan macallinka oo ay ogaadaan waxa ay caadi u yihiin carruurtooda. Waxaad ku baran doontaa waxa manhajka loo dhigo maado kasta. Waxaad awood u yeelan doontaa inaad iska diiwaangeliso si aad uga caawiso fasalka dhexdiisa sannadka oo dhan, oo aad ka soo ururiso macluumaad kale oo muhiim ah macallinka ilmahaaga. Waqtigani waa wakhti fiican oo la waydiiyo su'aalo! Habeennada Manhajka waxaa caadiyan la qabtaa usbuuca saddexaad ee sannad dugsiyeedka, oo waxaa loo qaybiyaa laba habeen iyo saacadaha shaqada, si ay ugu suuragasho waalidiinta leh caruur badan inay dhigtaan fasal kasta. Tani waa dhacdo waalid kaliya. Xannaano carruureed lama heli karo habeennadan.
Dhismaha Curvy Hallway wuxuu ku yaal dhinaca bari ee dugsiga, oo u dhaw goobta jimicsiga cusub. Wadada hoolka ayaa marta hal dhinac oo barxadda dhexdeeda ah, oo waxay leedahay qaanso qaas u eg oo daaqadaha ah Waqtigan xaadirka ah, hoolka hoyga ayaa ah qolka Band iyo Orchestra, qolka Suuragalnimada Sare, Qolka Hadalka & Luqadda, Qolka Mashruuca Aasaasiga, iyo khabiiro kale.
Dugsi-ka-soo-qaad iyo Ka-Qaadis Dugsiga
7:15 Xafiis ayaa furan
8:30 Basaska ayaa imanaya
8:40 Iskuul ayaa bilaabmaya
3:20 Cayrinta iskuulka
4:00 Xafiis wuu xidhmayaa
Waxaan hiigsaneynaa in ahmiyadda iskuulkayaga iyo fasalkasta oo gudaha ah ay tahay kobcinta amaanka, caqabadaha, iyo meelaha farxadda leh ee caruurta oo dhami ku gaari karaan waxa ugu wanaagsan. Magancelinta: Luqadda Anshax marinta Nidaamka magdhowga ee Clear Springs waxaa la aasaasay iyada oo ardayda iyo macallimiintu horumariyaan qandaraas bulsho (xeerar) ay rumeysan yihiin inay abuuri doonaan fasal ku habboon. Ardayda ayaa qaadaya mas'uuliyada dhaqankooda isla markaana waxaa loo oggol yahay fursad inta badan kiisaska inay ku xalliyaan wixii dhibaato ah ee ay kala kulmaan fasalka. Maamulaha waxaa laga yaabaa inuu waydiiyo inuu ardayda ka caawiyo xalinta dhibaatada markay dhibaatooyinku ka dhacaan fasalka, baska, qolalka jiifka, qolka qadada, ama garoonka ciyaarta.
Iskuulada Dadweynaha Minnetonka waxay adeegsan jireen qaabkan si ay u sii wadaan kor u qaadida bulshada fasalka. Habkaani wuxuu adeegsadaa istiraatiijiyado wax ku ool ah oo isugu keenaya barashada bulshada iyo tacliinta maalin dhan. Mabaadi'da hagitaanka ee qaabkan ayaa ah:
Manhajka bulshada ayaa muhiim u ah sida manhajka waxbarashada
Sida carruurtu wax u barataa ayaa muhiim u ah waxa ay bartaan.
Kobcinta ugu weyn ee garashada waxay ku dhacdaa is dhexgalka bulshada.
Waxa jira dhowr ah xirfadaha bulsheed ee ilmuhu u baahan yihiin: iskaashi, sheegasho, mas'uuliyad, naxariis, iyo is-xakameyn.
Ogaanshaha carruurta aan wax barno-shaqsi ahaan, dhaqan ahaan, iyo horumarin ahaanba- waxay muhiim u tahay sida garashada waxa aan dhigno.
Ogaanshaha qoysaska carruurta aan barinno oo ku casuunno kaqeybgalkooda waxay muhiim u tahay waxbarashada carruurta.
Sida dadka waaweyn ee iskuulka u wada shaqeeyaan waa u muhiim karti shaqsiyeed: isbadal waara wuxuu ku bilaabmayaa bulshada qaangaarka ah.
Dabeecadaha Nidaamka Isdaba-marinta: Waxay caddeysaa Dugsiga Hoose ee Springs, iyadoo la waafajinayo Nidaamka Dugsiga Dadweynaha Minnetonka iyo qaanuunka gobolka uu meelmarin doono siyaasad dulqaad la'aan eber ah hubka, rabshadda, iyo kadeedka galmada.
Carruurtu waa inay xidhaan dhar ku habboon dugsiga iyo cimilada. Ardayda gashato kabo aan badbaado u lahayn waxbarashada jimicsiga waxaa la weydiisan doonaa inay fariistaan inta lagu gudajiro xilliga nashaada fasalka. Fadlan ku calaamadee dhamaan waxyaabaha ardayda ku qoran magaca ardayga ama magacyadooda. Koofiyadaha waa inaan lagu xidhin gudaha dhismaha marka laga reebo “maalmo koofiyadeysan” oo gaar ah. Ka eeg Nidaamka Degmadda Minnetonka 503 wixii macluumaad dheeri ah.
Markaad kaxayso ama soo qaadanayso ilmahaaga, fadlan raac tilmaamahan:
Caruurtu waa inaysan imaanin kahor 8:15 aroornimo, inayna ku jirin Naadiga Baadigoobka.
Fadlan u dhaqaaq dhanka hore oo dhan marka aad ka degeyso ama aad kareyso waddada.
Cayrinta iskuulka markay tahay 3:20 pm Fadlan ka soo qaad cunuggaaga 3:45 pm
Hadaad rabto inaad dhigato oo aad gasho dugsiga si aad u soo qaadatid, fadlan waxaad dhigtaa Xarunta Adeegga Degmadda ee dhigashada baarkinka woqooyi-bari ee Clear Springs.
Fadlan la soco in calaamadaha joogsiga ee Xarunta Adeegga Degmadu aysan ahayn joogsi afar-gees ah. Fadlan u dhiib baabuurta soo socota.
Nabdoonaanta ayaa ah welwelkeenna koowaad. Waad ku mahadsan tahay inaad xawaarahaaga hoos u dhigto.
Lambarrada Degdegga ah
Barte Afka Ingiriisiga ah
Fursad loo wada siman yahay
Nambarada lagaala xiriiro xaaladaha degdega ah waxaa lagu hayaa feyl xafiiska. Markuu ilmahaagu keeno foomka xiriirka degdegga ah ee guriga xilliga dayrta, fadlan hubi in dhammaan macluumaadka ay sax yihiin, cusboonaysiiyaan wixii aan ahayn, oo u soo celi sida ugu dhakhsaha badan ee suurogalka ah. Waa muhiim in rikoorkaan la ilaaliyo. Fadlan xafiiska ogeysii haddii ay jiraan wax isbeddelo ah ama wax ku dar ah inta lagu jiro sanadka.
Adeegga ELL (Luuqada Bartaha Ingiriisiga) ee Degmadda Iskuulka Minnetonka waa barnaamij federaalku waajibiyay isla markaana waxaa la siiyaa ardayda ku hadasha luuqadda koowaad oo aan ahayn Ingiriisiga. Heerka dugsiga hoose, waa barnaamij ka caawiya ardayda inay la qabsadaan dhaqanka cusub oo ay bartaan luqadda Ingiriisiga si ay ugu shaqeeyaan uguna guuleystaan fasalka iyo sidoo kale bulshada guud ahaanba.
Degmadda Iskuulka Minnetonka ma takooriyo ku saleysan midab, midab, caqiido, diin, asal wadan, jinsi, da ', guur ama xaalad laxiriirta caawimaada bulshada ama naafonimada barnaamijyada waxbarashadiisa, nashaadaadkiisa, ama dhaqanka shaqadiisa.
Naadiga sahaminta ayaa bixiya tayada daryeelka carruurta ka hor da'da dugsiga iyo dugsiga kadib. Adeeggu wuxuu ku shaqeeyaa Clear Springs kahor iyo kadib iskuulada Minnetonka Adeegyada Waxbarashada Beesha. Saacaduhu waa 6:30 aroornimo ilaa 6 pm maalmaha shaqada, oo ay ku jiraan ciidaha iskuulka. Lacagta wax lagu barto waxay taageeraan barnaamijka. Macluumaad dheeri ah, wac 952-401-6832.
Maxay u yihiin fasalada qaarkood iyo nashaadaadyada meertada Shanta-maalmood ah halkii laga isticmaali lahaa toddobaadle?
Isku bedelka waxbarashada jimicsiga, muusikada, farshaxanka iyo fasalada xarunta warbaahinta shanta maalin ee jadwalka ah micnaheedu waa inuusan cunug u seegin howlahan qaaska ah sababtoo ah ciidaha ama xiritaanka iskuullada degdega ah.
Macallinka cunuggaaga ayaa caadi ahaan ku siin doona wareegga toddobaadka xiga ee wargeys toddobaadle kasta.
PTO waxay isku dubaridaa sanduuqa loo yaqaan 'Tops Tops for Education' iyadoo ku mataleysa dugsiga. Waxaan helnaa 10 senti sanduuq kasta oo sarreeya oo laga soo aruuriyey u qalmidda General Mills iyo alaabada Land O'Lakes. Ardayda ayaa u keeni kara sanduuqyada santuuqa dugsiga oo ku ridi kara weelka calaamadda leh ee ku yaal albaabka hore.
Nidaamka Shahaadaynta iyo Warbixinta ee heerka dugsiga hoose waxaa loogu talagalay:
Muuji guusha waxbarasho
Hayso jawaab celin macno leh
Daacad noqo, caadil, daah furnaan, aaminaad, iyo isticmaal saaxiibtinimo
Noqo mid tixraac-tixraac
La soco manhajka Iskuullada Minnetonka
Muuji isbadal dhexmara heerarka fasalka iyo iskuulka
Ardayda waxaa lagu qiimeeyaa maadooyinkooda oo dhan ah (B) Bilow, (D) Hormarin, (S) Nidaamka shahaadaynta oo sugan.
Manhajka Jinsiga ee Aadanaha
Xilwareejinta, 31-ka Oktoobar, waa maalin ay u dabbaaldegaan carruurta badankood sidii wakhtigooda loo labisan lahaa, loo ciyaari lahaa, loona heli lahaa "daweynno" dheeraad ah.
Waxaan ku qabannaa dugsiga 'Parade Halloween' dugsiga iyo wadada ka dambeysa iskuulka (ogolaanshaha cimilada) maalinta Halloween oo laga bilaabo 1:45 pm, waxaana raacay xafladaha fasalka. Haddii Maalinta Halloween ay ku dhacdo usbuuca dhammaadka usbuuca, waxaan u dabaaldegeynaa Jimcaha hore. Caruurtu waxaa laga yaabaa inay dharka u soo qaataan dugsiga oo ay gashadaan ka hor carwada.
Waxaan rabnaa in qof walbaa helo maalin farxad leh. Fadlan maskaxda ku hay inaan haysanno caruur aad u da 'yar oo ku nool meelaha loo yaqaan' White Springs ', oo dharka loo yaqaan' cabsi 'ma haboona. Waxaan rabnaa in aan soo jeedinno in carruurtu tixgeliyaan labiska sida sheeko-sheeko, jilaayaal taariikhi ah, xayawaanno, bocorro iyo waxyaabo kale oo xiiso iyo xiisa leh. Waxaan si xoogan u niyad jabineynaa dhar kasta oo noqon kara dagaal ama naxariis daro dabiiciga ah (yacni Freddy Krueger). Sidookale, fadlan xafid caruurtu ku ciyaaraan hubka, seefaha, iyo mindiyaha si aad uhesho xaflada habeenkii.
Qof walba waxaa lagu casuumay inuu arko carwooyinka, oo sanado badan guulo waaweyn gaadhay, ka dib inuu ku biiro madaddaalada xafladda fasalka canuggaaga.
Macallin Sare oo Suurtogal ah iyo xirfad-yaqaan wax baris waqti-dhiman ah ayaa bixiya saddex heer adeeg oo ah "Springs".
Adeegyada Heerka 1 ayaa ardayda siiya caqli badan adeegyadan soo socda:
Fasalada WingS - Fasalada koowaad ilaa shan, kooxo yaryar oo ardayda awooda weyn leh waxay kulmayaan ugu yaraan hal jeer lixdii maalmoodba. Afar qaybood oo isku dhafan ayaa baraya sanadka oo dhan maalin dugsiyeedka caadiga ah baraha HP. Fasalada kobcinta tacliinta ayaa la siiyaa ardayda u qalanta fasalada K iyo
Isku-darka - Ardayda HP waxaa loo kala qaybiyaa kooxo 4-7 ah oo ku dhex jira fasalka awood isku-dhafan ee koowaad ilaa fasalka shanaad. Xulashada adeeggan waxay u baahan tahay liistada hubinta ee kormeerka macalinka iyo waalidka, dhibcaha guusha, iyo natiijada imtixaanka sirdoonka. Soo gudbinta waxaa bilaabi kara waalid ama macalin.
Adeegyada Heerka 2 waxaa loogu talagalay inay siiyaan kobcinta ardayda leh aagag gaar ah oo hibo leh. Fursadahaas waxaa la siiyaa iyada oo lala kaashanayo macallinka fasalka.
Fasalada xiisaha gaarka ah waxaa lala kaashanayaa iskaashiga macalinka fasalka iyo iskaa wax u qabso waalidiinta. Xisaabinta xawaaraha ee ardayda fasalada 4-aad iyo 5-aad ayaa lagu bixiyaa heerkan. Moodellada kobcinta ee iskuullada oo dhan (SEM) waxay siisaa fursad loogu talagalay daraasad madax-bannaan oo ay helaan ardayda garanaya aag waxbarasho ama maado. Ardaydu waxay "ugu wareegaan" Qolka kobcinta HP fursadan. Xulashada adeegyada Heerka 2 waa codsi macalin.
Adeegyada Heerka 3 waa fursado ay heli karaan dhammaan macallimiinta iyo ardayda. Macalinka HP wuxuu galayaa fasalka caadiga ah, sida loo codsaday, si uu u baro dhammaan xirfadaha fikirka hal abuurka iyo hal abuurka leh ee ardayda. Agabyada kobcinta iyo warsidayaasha ayaa la siiyaa dhammaan macallimiinta fasalka. Tusaalooyinka adeegyada barnaamijyada dheeriga ah ee loo heli karo arday kasta oo danaynaya waa: Bandhigyada Fahmada, Math League, iyo Sawirka Imaatinka.
Tabarucayaasha waalidiinta ayaa ah shuraako muhiim u ah bixinta adeegyada Heerka 2 iyo 3. Fadlan wac macallinkayaga HP ee ah 952-401-6992 haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid adeegyada barnaamijka ama aad jeclaan lahayd inaad iskaa wax u qabso ku shaqeyso. Macluumaad dheeri ah, fadlan booqo bogga Weyn Suurta galnimada .
Tilmaanta ku saabsan nolosha qoyska iyo galmada aadanaha waa qeyb ka mid ah manhajka Iskuullada Minnetonka ee fasalada K-12. Barnaamijka isku-dubbaridan ayaa ardayda siinaya faham ku saabsan geedi socodka koritaanka jirka, maskaxda iyo shucuurta, iyo horumarinta cilaaqaadka lala yeesho qoyska iyo saaxiibada. Waaliddiinta waa la ogeysiin doonaa taariikhaha iyo waxa fasalada ku jira. Dhammaan waxaa lagu casuumi doonaa inay dib u eegaan qalabka manhajka fasalka 5aad. La xiriir maamulaha dugsiga haddii aad jeceshahay in ilmahaagu ka raalli ahaado fasallada qaarkood. Fadlan la xiriir maamulaha aad jeclaan laheyd inaad horay u aragto manhajka.
Shaqada gurigu waxay ku habboon tahay carruurta da'da aasaasiga ah illaa inta loo dhammeyn karo si madax-bannaan waana xoojinta waxa laga barto dugsiga. Daraasad lagu sameeyay iskuulada wax ku oolka ah waxay noo sheegeen in shaqada guriga looga baahan yahay in si joogto ah loogu meeleeyo, ay tahay xoojinta ama ku celcelinta halkii ay ka ahaan laheyd waxyaabo cusub, oo aan loo adeegsan ciqaab ahaan.
Goobaha 'Clear Springs' waxaan raacnaa tilmaamahan:
Shaqada guriga waxaa lagu meelayn karaa dhammaystirka shaqooyinka aan dhammaysan ee heerka kartida ardayga.
Shaqada gurigu waxay noqon kartaa nashaadaad kobciya oo dheereeya howlaha fasalka sida cilmi baarista ama sameynta mashruuc saynis.
Habka higgaadinta higaada waxaa loo tixgeliyaa shaqada guriga.
Macallimiintu waxay si joogto ah ugu meeleeyaan nashaadaadyo ay ka mid yihiin xisaab ama kaadhadh toos ah.
Ka bixida Dugsiga Hore
Lumiyay oo La Helay
Iskuullada Minnetonka waxay bixiyaan caymiska shilalka ardayda. Foomamka kaqaybgalka ayaa loo diri doonaa guriga muddada usbuuca ugu horreeya ee dugsiga. Waajib kuguma aha kaqaybgalka.
Waqtiga ugu dambeeya ee maalinta waa waqti waxbarid iyo qiimeyn muhiim ah u leh cunuggaaga. Fadlan dadaal ugu dadaal si aad u qorsheysatid ballamaha ka dib maalinta dugsiga dhammaado. Waalidku waa inay kaxeystaan caruurta xafiiska markay ilmaha ka soo baxayaan goor hore oo ay saxeexaan ilmaha hadii ay soo laabanayaan kahor dhamaadka iskuulka. Markaad ilmaha kaxayso dhamaadka maalinta, ka hubi xafiiska dugsiga. Xoghaynta waxay ilmaha ka codsan doontaa fasalka. Waalidku waa inay ku sugaan ilmahooda xafiiska weyn.
Wax lumay oo laga helay dharka iyo sanaadiiqda qado ayaa ku yaal dhabarka dambe ee u dhaw Xarunta Warbaahinta. Dahabka, lacagta, boorsooyinka iyo boorsooyinka iyo waxyaabaha kale ee yaryar ayaa lagu sheegan karaa xafiiska. Waxaad ka caawin kartaa cunuggaaga inuu si fudud u soo helo dharkii lumay adoo ku calaamadaynaya shey magaciisa / magaceeda. Fadlan calaamadee sanaadiiqda qadada sidoo kale.
Waxyaabaha aan sheegashada lagu soo bandhigin waxaa lagu soo bandhigayaa ugu yaraan hal usbuuc iskuulka labo jeer sanadkii. Wax kasta oo aan sheegan wakhtigaas kadib waxaa loogu deeqi doonaa tabaruc maxalli ah.
Haddii ilmahaagu wax ka tago baska, waxaa la sheegan karaa marka isagu / iyadu baska mar kale raaco. Alaabada waxaa lagu hayaa baska qiyaastii hal toddobaad ka dibna waxaa lagu ridayaa Shirkadda koowaad ee Ardayda Baska ah ee lumay oo la helay.
Xeerarka Qolka Qolka:
Fadlan qaado qado buuxa oo caafimaad leh.
Fadhiiso miiska fasalkaaga ilaa aad raalli ka tahay.
Ku hadal codka fasalka.
Gacmahaaga ku hay cuntadaada.
Masuul ka noqo nadaafadda deegaankaaga.
Qado kulul ayaa maalin walba lasiiyaa waxaana laga heli karaa internetka . Waxa kale oo aad kala soo degsan kartaa barnaamijka Nutrislice si deg deg ah loogu geliyo menus. Ka eeg bogga internetka Adeegyada Nafaqada wixii faahfaahin ah.
Waa lagugu soo dhaweynayaa inaad soo booqato dugsiga si aad qado ula cunid cunuggaaga. Hadaad qorsheynayso inaad cuno qado kulul booqashadaada, fadlan ogeysii dugsiga 952-401-6931 illaa 10 am ujeedada qorshaynta.
Clear Springs waxay leedahay nidaam xisaabinta qado kumbiyuutar lagu shaqeysto. Nidaamku wuxuu u oggolaanayaa waalidiinta inay dib u bixiyaan lacag-bixinta xisaabta qadada ee qoyska. Ardaydu waxay u adeegsan doonaan lambarkooda gaarka ah (PIN Aqoonsiga Lambarka) si ay u bixiyaan qadadooda maalin kasta. Markasta oo nambarka PIN uu u isticmaalo ubadka ama khasnajiga qado ama iibsashada caano, waxaa laga goynayaa xisaabta ilmaha.
Bixinta Lacag Koontada:
Jeegag gooni ah oo loo sameeyay Adeegyada Nafaqada ee Minnetonka ayaa lagama maarmaan u ah cunug kasta oo qoyska ka tirsan. Waxaad sidoo kale lacag ku bixin kartaa khadka tooska ah, adigoo u maraya Skyward Family Access (eeg SKYWARD).
Qado bilaash ah ama qiime jaban ayaa diyaar u ah carruurta ka socota qoysaska dakhligoodu hooseeyo.
Macluumaadka ku saabsan barnaamijkan dowladda Mareykanka waxaa loo diraa guriga. Haddii qoyskaagu horumar sameeyo baahi lacageed inta lagu jiro sanadka, wac kormeeraha adeegga cuntada ee Iskuullada Minnetonka, 952-401-6800. Magacyada carruurta heleysa gargaarka cuntada ayaa loo xafiday si qarsoodi ah. Wixii macluumaad dheeri ah, fadlan booqo bogga Adeegyada Nafaqada .
Shabakada Waalidka ee Minnetonka
Shaqada guriga ee jirro dartiis Sababta oo ah jirro dhacdo (1-3 maalmood) cunugaada wuxuu ubaahan karaa inuu sameeyo shaqada seegtay. Ilmuhu wuxuu lahaan doonaa tiro la mid ah maalmaha ay uga maqnaayeen jirro darteed si uu u soo ceshado shaqadii iskuulka ka maqnaa (tusaale, haddii ay maqnaayeen 2 maalmood, waxay lahaan doonaan labo maalmood ka dib markay ku soo noqdaan dugsiga si ay shaqada u qabtaan).
Sababtoo ah hab-dhaqankeena wax barista-gacanta, waxaa suuragal ah in aysan suurta gal ahayn in la dhammeeyo dhammaan shaqooyinka fasalka. Waad la xiriiri kartaa macalinkaaga si aad iskugu dubbaridid shaqa-guri u qaadista inta lagu jiro jirro cunuggaaga.
Shaqa-guriyeedka Fasaxyada darteed
Shaqaalaha The loo yaqaan '' Springs 'waxay ku dhiirigelinayaan qoysaska inay qorsheeyaan fasaxyada inta lagu jiro fasaxayaga joogtada ah ee loo qorsheeyay. Si kastaba ha noqotee, haddii fasax la qaato inta lagu jiro jadwalka dugsiga caadiga ah, shaqada qurxiyo ayaa la qoondeyn doonaa marka ilmuhu soo laabto.
Khabiirka xisaabta wuxuu ku shaqeeyaa habab badan si kor loogu qaado xisaabta wuxuuna ka caawiyaa carruurta inay noqdaan bartayaal guuleysta:
Waxay siisaa imtixaannada ogaanshaha ardayda cusub
Waajibaadka shaqaalaha iyo waalidiinta
Wuxuu baraa kooxo yaryar oo caruur ah si ay u taageeraan waxbarashadooda
Waxay ku dheereeysaa barashada wax qabadyada kobcinta
Hadafka barnaamijka Warbaahinta waa in la hubiyo in dhammaan ardayda ay noqdaan kuwa adeegsada fikradaha iyo macluumaadka. Natiijooyinka soo socda ee Barteha waxaa lagu dabooli doonaa wada-qorsheyn iyo casharo la-is-bariddo macallinka fasalka. Casharo fara badan oo Warbaahinta ah ayaa taageera oo xoojiya manhajka Farshaxanka Luuqada.
Hanuuninta iyo adeegsiga Xarunta Warbaahinta
Qeyb ka mid ah buugga iyo goobta buugaagta ee Xarunta Warbaahinta
Soo-dhawaynta suugaanta- Waxaad xoogga saartaa qoraayaasha iyo sawir-bixiyeyaasha gaarka ah, buugaagta Caldecott
Qayb ka mid ah buugga iyo qaabaynta buugaagta ee Xarunta Warbaahinta
Aqoonso buugaagta khayaaliga ah iyo kuwa aan khusaynin
Adeegsiga xarumaha raadinta elektiroonigga ah
Helitaanka, qiimeynta iyo adeegsiga macluumaadka elektiroonigga ah
Goobta iyo adeegsiga joornaalada iyo joornaalada
U adeegsiga ilaha tixraac ahaan furayaasha helitaanka macluumaadka
Soocelinta suugaanta - Caldecott, Newbery iyo buugaag kale oo sharaf ah
Adeegso nambarrada wicitaannada iyo sumadaha shelf si aad uheshid alaabada
Aqoonso buugaagta khayaaliga ah iyo kuwa aan khayaalka ahayn
Muuji fahamka Nidaamka Dewey ee Dewey
Hel oo isticmaal joornaalada iyo joornaalada
Isticmaal saldhigyada raadinta elektiroonigga ah
Isticmaalka akhbaarta ku saleysan macluumaadka
Mahadnaqa suugaanta - Caldecott, Newbery, Maud Hart Lovelace iyo buugaagta kale ee sharafta leh
Wixii daawooyin ah ee u baahan in la maareeyo inta lagu jiro saacadaha dugsiga waa in lagu hayaa xafiiska caafimaadka. Iskuulka iyo xubin kastoo shaqaalaha ka mid ah ma bixin karaan daawo caruur marka laga reebo talabixinta dhakhtarka ilmaha.
Haddii ilmahaagu u baahan yahay inuu daawo qaato inta lagu jiro maalinta dugsiga, ama haddii dawada ka hortagaysa xasaasiyadda ay tahay in gacanta lagu hayo, fadlan weydii foomka sii-deynta. Waalidku iyo dhakhtarku waa inay saxeexaan foomka siideynta. Warqadda dawooyinka waa inuu qof weyn keeno xafiiska caafimaadka uuna ku jiraa weelka asalka ah. Weelka waa inuu lahaadaa magaca ardayga iyo qiyaasta saxda ah ee ku taal sumadda. Markay suurtagal tahay, waan kaaga mahadcelineynaa weydiinta dhaqtarkaagu inuu jadwaleeyo waqtiyada daawada si aad guriga ugu soo qorto dawo dhakhtar kuu qoro. Xeerarkani waxay sidoo kale khuseeyaan dawooyinka miiska laga soo iibsado. Fadlan u hagaaji iyo ka jawaab su'aalo dheeraad ah oo la xiriira dawooyinka dugsiga xafiiska Caafimaadka 952-401-6954.
Kalkaaliyahayaga Iskuulka shatiga leh iyo / ama khabiirada khibrada leh ayaa bixiya gargaarka degdega ah ee xaaladaha degdegga ah, la xiriir waalidiinta waalidiinta carruurta jiran, xafida diiwaannada caafimaadka iyo baaritaanka caafimaadka. Waxaa jira duruufo dhawr ah oo xirfad-yaqaannada caafimaadku siin doonaan dawooyinka dhakhtar qoro (See Daawooyinka). Sharciga Minnesota wuxuu farayaa in cunug kasta oo dhigta dugsiga laga tallaalo cudurka gawracatada, teetanada, xiiqdheerta, dabeysha, jadeecada, qaamo-qashiirka iyo jadeecada Jarmalka. Uma oggolaan karno ilmahaagu inuu dugsiga tago haddii aadan soo celin foomka caddaynaya inuu ilmahaagu qaatay tallaaladan.
Fadlan ka codso xubin ka noqoshada boggayaga Kooxda Facebook adoo u gudbaya "Shabakadda Waalidinta ee Isku-xidhka Immersion" Waxaad ka heli doontaa beel caawimaad leh oo waalidiinta ka caawin kara inay ka jawaabaan su'aalaha oo kugu toosiyaan ilaha.
Macallinka muusiggu wuxuu la kulmaa ardayda fasalada K-5 wadarta guud 75 daqiiqo shantii maalmoodba.
Waxbarashada muusikada waa barnaamij waxbarasho oo isku xigxiga kaasoo ardayda bara sida loo:
Ku raaxayso heesaha.
Aqoonso astaamaha shanta shay ee muusikada: heesta, wada noolaanshaha, laxanka, midabka codka iyo dhaqdhaqaaqa.
Samee xirfadaha heesaha, dhageysiga, qalabka lagu ciyaaro, iyo dhaqdhaqaaqa.
Hesho qadarin iyo fahanka noocyada kala duwan ee muusikada.
Khibrad u yeelo muusikada si ay u muujiso is-muujinta iyada oo loo marayo wax qabad.
Samee aasaaska nolosha raaxada ee muusikada labadaba jilaa ahaan iyo dhageyste ahaanba.
Ku hees heeso goobeed fasalka shanaad.
Waxaad ka heli doontaa joornaalada waraaqo xilliyeed ah dugsiga, PTO iyo shaqaalaha kale. Wargeysyada fasalka waxaa loo diraa guriga usbuuc kasta si loo dhiirrigeliyo dhacdooyinka fasalka dhexdiisa loona ilaaliyo la xiriirka waalidiinta. Joornaalku waa nooc ka mid ah isgaadhsiinta. Waad adeegsan kartaa emayl, qoraal qoraal ah ama taleefan wicitaan sidoo kale. Waxaan aaminsanahay wada xiriirka qoys kasta inuu muhiim u yahay guusha barnaamijkayaga dugsiga hoose.
Iyada oo la raacayo shuruucda Federaalka sida Cinwaanka IX ee 1972 iyo Cinwaanka VI ee 1964 iyo qawaaniin dowladeed oo kala duwan, Xeerka Gudiga Iskuullada A-15 wuxuu soo bandhigayaa Nidaamka Degmo ee Minnetonka ee takoorka ku saleysan jinsi, midab, caqiido, diin, qaran. asalka, galmada, da'da guurka, naafonimada ama heerka la xiriira kaalmada bulshada xagga barnaamijyadeeda waxbarasho, howlaha iyo siyaasadaha shaqada. Ashtakooyinka laxiriira qodobada siyaasadan waa in loo gudbiyaa Sarkaalka Waxqabadka Degmadu ee Iskuulka Minnetonka, 5621 County Road 101, Minnetonka, MN 55345.
Amarka Xiriirka Shaqaalaha
Nidaamka Dhaqanka ee Weerarka ah
Haddii aad ka walwal qabtid dugsiga, oo ku lug leh kaliya cunuggaaga ama arrin ballaaran, fadlan nala socodsii sida ugu dhakhsaha badan ee suurogalka ah. Waa tan amar ay dadku la hadlaan.
Macallinka - Xariiqa koowaad ee isgaarsiinta 952-401-6950
Maamule: Curt nijaar 952-401-6953
Maamulaha guud: Dr. Dennis Peterson 952-401-5004
Xubnaha Guddiga Dugsiga (Fiiri Guddiga Dugsiga )
Abuuritaanka iyo dayactirka meel aamin ah, loolan, iyo farxad farxadeed ee carruurtu wax ku bartaan, ku ciyaaraan oo ku koraan waa mid ka mid ah yoolalkayaga koowaad. Si taas loo gaaro, waxaan si adag uga shaqeyn doonnaa ka caawinta ardayda dhibaatada xalinta caqabadaha dhaca. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira xaalado khatar ah ama dhibaateyn kara dadka kale. Xaaladahaas waxaan raacnaa nidaamka iyo nidaamka guddiga Dugsiga. Ardayda dhigata Iskuullada Minnetonka waxay xaq u leeyihiin inay wax bartaan oo ku koraan deegaan ka xor ah dhibaateynta diinta, midab-takoorka ama galmada. Akhlaaqda xadgudubka ah ee loo geysto dadka kale looma dulqaadan karo waxayna ku dambayn doontaa ficil edbin ah. Kuma filna ardayga inuu iska ilaaliyo anshax xumida naftiisa / nafteeda. Ardaygu wuxuu leeyahay masuuliyada inuu xasuusiyo dadka kale ee muujiya dhaqan xumada in dhaqan xumada noocaas ahi ay tahay inay joojiso.
Arday kasta oo aaminsan inuu asaga ama ayada dhibbane u yahay anshax xumo - taasi waa, akhlaaq xumo la xiriirta diinta, jinsiyada ama kadeedka galmada iyo rabshadaha - ama qof kasta oo akhbaarta ku saabsan akhlaaqda la xiriirta ardayda ama dadka waa weyn ee laga yaabo inay dabeecad xumeeyaan waa inay soo sheegaan. lagu eedeeyay falalka isla markiiba. Waxaad u sheegi kartaa anshax xumo macalinkiisa / eeda ama maamulaha dhismaha.
Qorshaha Xulashada Waalidka
Slips / Ogolaanshaha Baska
Xayawaanka gurijoogta ah
Waalidka Iskuulada Dadweynaha Minnetonka ayaa dooran kara in cunugoodu dhigato iskuul aan ka aheyn iskuulka xaafadooda. Codsigan waxaa badanaa la sameeyaa marka iskuulada dariskaaga ah dookhaada aan laga bixin iskuulka xaafadaada. Maamulahaaga ayaa kaa caawin kara arjiga barnaamijkan.
Fasal kasta wuxuu yeelan doonaa saddex xisbi sanadka oo dhan:
Xafladda Xussein - 31ka Oktoobar
Xilliga Jiilaalka - usbuuca ka hor Fasaxa Jiilaalka
Maalinta Jacaylka - Febraayo 14-keedii
Dhinacyada waxaa qorsheeya macalinka iyo waalidiinta qolka, laakiin DHAMMAAN waalidiinta waxaa lagu dhiirigelinayaa inay caawiyaan ama ka qeyb galaan xafladaha.
$ 5 tabaruc lacag caddaan ah ayaa laga yaabaa inuu ku soo qaado macallinkaaga ama Madaxa Qaybta Maskaxda bilowga sannad dugsiyeed kasta. Lacagtaan waxaa loo isticmaalaa xafladaha fasalka.
Ilaa dhamaan wiilasha ama gabdhaha qolka cunuggaaga lagu casuumo xaflad gurigaaga ah, fadlan ha u dirin casumaad dugsiga si loo qaybiyo.
Safarada Meelaha Safarka ah iyo Dhacdooyinka kale ee Iskuulka:
Fadlan hubi jeegag in la bixiyo si loo nadiifiyo Dugsiga Hoose ee Springs
Amarada Buugga Fasalka:
Fadlan ka samee jeegag lagu bixin karo naadiyada buuggaagta shaqsiyeed (yacni Scholastic Book Club)
Fadlan ka samee jeegag lagu bixin karo Adeegyada Nafaqada ee Minnetonka
Dhacdooyinka ay maalgalisay PTO:
Fadlan ka dhig jeegag in la bixiyo si loo nadiifiyo Springs PTO (eeg PTO WAXYAABAHA).
$ 5 tabaruc tabaruc ah ayaa laga qaadayaa fasal kasta bilowga sanad dugsiyeedka si loogu isticmaalo saddexda xisbi.
Waa inaad u dirtaa emayl iskuulka ama u soo dirtaa qoraal qoraal ah, taariikhaysan oo saxeexan cunugaaga xaaladaha soo socda:
Cunugaaga wuxuu aadayaa guriga qof kale iskuulka kadib.
Ilmahaagu wuxuu raacayaa bas ka duwan ama wuxuu ku baxayaa joogsi bas bas ka duwan.
Waxaad rabtaa in ilmahaagu sii joogo inta lagu jiro biririfta, ama uu seego fasalka jimicsiga jimicsiga (haddii sababta keentaa in ka badan saddex maalmood, waxaan u baahan nahay warqad ka socota dhaqtarkaaga).
Ilmahaagu goor hore ayuu dugsiga ka tagi doonaa, ama wuu bixi doonaa oo soo noqdaa inta lagu jiro maalinta.
Mar alla markay carruurtu iskuulka yimaadaan, kama bixi karaan dugsiga ayada oo aan fasax qoraal ah laga helin waalid ama xubin ka tirsan shaqaalaha dugsiga. Waa inay sidoo kale soo galaan ama galaan xafiiska dugsiga.
Waan ognahay in xayawaannada guryuhu yihiin xubno muhiim ah oo reerka ah waxaanna dooneynaa inaan kula dabaaldegno. Si kastaba ha noqotee, xasaasiyad dartiis, ma oggol nahay in xayawaannada dugsiga lagu haysto.
Minnetonka, barnaamijkeena waxbarasho ee dugsiga hoose wuxuu siiyaa ardayda fursad ay ku sameyaan baahiyo jir ahaaneed, nafsadooda iyo tijaabinta, inay bartaan la shaqeynta asxaabtooda iyo inay ogaadaan awoodahooda. Carruurta waxaa lagu dhiirigelinayaa inay ka shaqeeyaan yoolalka shaqsiyadeed ee horumarka. Ardayda loo yaqaan 'Springs Springs' waxay la kulmaan macalin wax ka dhiga jimicsiga mudo dhan 100 daqiiqo inta lagu gudajiro 5 maalin wareega.
Jimicsiga jirku waa barnaamij waxbarasho oo isku xigxiga oo ardayda wax bara sida:
Ku samee xirfadaha aasaasiga ah ee dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa iyo kubbadda, oo waxaad ku dhistaa si loogu raaxeysto oo abaalmarin loogu helo ka qeybgalka nashaadaadka jir ahaaneed.
Fahmaan sida jirkoodu ugu socdo jihooyinka kala duwan, xawaaraha iyo qaababka kala duwan, iyo sida isu dheellitirka iyo miisaanka wareegga uu u saameeyo dhaqdhaqaaqa.
Fahmaan oo ka qaybqaataan nashaadaadyo jireed oo xoog leh kuwaas oo ka caawin kara horumarinta iyo kormeerka jimicsiga jirka noloshooda oo dhan.
Fahmaan oo ay horumariyaan xirfadahooda isboorti oo ay la socdaan garashada qiimaha cayaaraha wanaagsan, iskaashiga, iyo ixtiraamka kala duwanaanshaha shaqsiyadeed.
Ku raaxayso adeegsiga xirfadahooda iyo aqoontooda faa iido ahaan aasaasida qaab nololeed caafimaad leh.
Ku dhexgal xirfadaha amniga iyo caadooyinka inta aad ka qaybqaadatid ciyaaraha, ciyaaraha iyo nashaadaadka jirdhiska.
Ku raaxayso khibradaha kala duwan ee laxanka.
U isticmaal qalabka sida ugu habboon.
Fadhiiso oo wajiga hore u riix slide.
Ka bood kaliya meelaha hoose ee qalabka.
Ku labbis hab habboon ciyaarta.
Ixtiraam dadka kale.
Cilmu-nafsi-yaqaanka iskuulka wuxuu caawiyaa macallimiinta inay gaaraan baahiyaha shaqsiyadeed ee ardayda. Cilmi-nafsi yaqaanka ayaa mas'uul ka ah tijaabada si loo go'aamiyo bal in ilmuhu u qalmo waxbarashadda gaadhka ah ama adeegyada Awoodda Sare leh. Tijaabooyin lama sameyn karo iyadoon waalidku rukhsad qoraal ah ka helin kahor.
Ururka Macallinka Waalidka (PTO) waa qayb muhiim ah oo ka mid ah bulshada loo yaqaan 'Clear Springs'. Waalidiinteennu waxay bixiyaan taageero muhiim ah oo ah qaab aruurinta lacagaha dhacdooyinka dugsiga iyo qalabka, nashaadaadka waalidnimada, taageerada macalinka iyo adeegyo badan oo iskaa wax u qabso ah.
Ku lug lahaanshahaaga firfircoon ayaa loo baahan yahay, maaha oo keliya waxa aad gacan ka geysan karto PTO iyo dugsiga, laakiin sida bayaan u ah carruurtaada in waxbarashadoodu muhiimad u leedahay qoyskaaga.
Bogga cad ee loo yaqaan 'Springs PTO' bogga waxaa ka buuxa macluumaad ku saabsan guddiga 'PTO', jadwalka dhacdooyinka, daqiiqadaha kulanka, guddiyada, iyo inbadan. Fadlan booqo bogga bogga PTO wixii faahfaahin dheeraad ah.
Waxyaabaha soo socdaa waa qayb ka mid ah dhacdooyinkayada:
Ku Noqo Dugsiga Furan Furan: Dhacdada usbuuca ka hor dugsiga, dhacdadani waxay kuu oggolaaneysaa adiga iyo cunuggaaga inaad la kulantaan macallinkaaga, aad aragtaan fasalkaaga oo aad iska dhigtaan sahayda dugsiga.
Carwooyinka Buug-yaraha / Akhriska / Akhriska: Waxaan qabanaa hal carwadood oo buug ah xilligii deyrta iyo hal gu'ga. Khidmadaha waxaa loo isticmaalaa in lagu iibsado buugaagta Xarunta Warbaahinta, lagu dhiso maktabadaha fasalka (iyada oo loo marayo Macallinka Wish Liistada) oo lagu maalgeliyo munaasabadaha PTO.
Quraacda loo yaqaan 'Pancake Quraac': Tani waa dhacdo ku saabsan bulshada dugsiga. Caadi ahaan waxay noo ahayd 'Dhacdadii Aabe' ee aabbayaal iskaa wax u qabso ku karsanaya inay kariyaan canjeelada iyo bolse kuleylka qoysaska 'Springs'. Dhacdada caadiyan waxaa la qabtey subaxa Sabtida bartamihii Noofembar.
Xisbiga Xilliga Jiilaalka: Tani waa munaasabad kale oo bulshada dugsiga ku weyn. Waxay taagan tahay fiid jimce ah bisha Janaayo ama Febraayo, waa habeen ay ka buuxaan waxqabadyo gudaha iyo dibadaba ah oo loogu talagalay qoyska oo dhan!
Bandhig Faneed : Waxaa la soo saaray horraanta gu'ga, kani waa carbis carruurteenna ah oo loo yaqaan 'The Springs'! Si ku-meel-gaadh ah oo ku saleysan tabaruc ahaan, ardayda waxay isqortaan inay qabtaan hibooyin kaladuwan. Munaasabadda waxaa lagu qabtaa Excelsior Hanti-Dhowrka.
Xilliga Habeenkii Waalidka - Aamusnaanta & Xaraashka Tooska ah: Kani waa lacag-aruurinta kale ee ugu weyn dugsiga, oo caadi ahaan la qabto habeen jimce ah xilliga gu'ga. Waa waalid iyo dhacdo keliya. Waa xaalad aan caadi ahayn, fiidnimo xiiso leh, oo leh aamusnaan iyo xaraashyo nool, iyo sidoo kale sawirro raffle iyo ciyaaro! Dhacdadan ayaa sida caadiga ah loo shubaa si loogu maalgeliyo baahi gaar ah (tusaale ahaan hal sano waxay u wareegtay dib-u-cusboonaysiinta Barxadda, hal sano si ay ugu iibsato buugaag badan maktabadda, hal sano oo dib loogu cusboonaysiinayo laguna keydinaayo Qolka Buugga).
Art Show: kani waa dhacdo layaableh, oo loogu talagalay in lagu soo bandhigo awoodaha farshaxanka ee ardayda oo dhan oo ku sugan Clear Springs. Hal shey oo farshaxan gacmeed ilmo kasta ayaa lagu soo bandhigi doonaa dugsiga oo dhan. Farshaxanku wuxuu soconayaa dhowr toddobaad, laakiin waxaan u hibeyneynaa hal habeen oo waalidiinta iyo qoysasku ay imaan karaan dugsiga oo ay ku socon karaan hoolalka loo beddelay Barxadda Fanka!
Duulista Gu'ga: kani waa dhacdadii ugu dambaysay ee dugsiga-sannadka oo idil. Soo qaado qoyska oo dhan oo waxaad ku raaxaysataa cunno iyo damaashaad muusig oo ku taal dhabarka dambe ee Cadceedda Cad! Heer kasto oo fasal ah waxay sameyn doontaa xulasho muusig, oo ay soo xuleen oo ay ku hagayaan macallinkayaga miyuusigga. Waa hab WONDERFUL ah oo sanadka lagu dhammeeyo!
Khabiirka Akhriska Laba-Luqadeed iyo Khabiirka Akhriska Ingiriisiga waxay u shaqeeyaan siyaabo badan si kor loogu qaado farshaxanka luqadda oo lagu caawiyo carruurta inay noqdaan bartayaal guuleysta:
Sii imtixaannada ogaanshaha ardayda cusub.
Wadashaqeynta gobolka iyo imtixaanka heerarka.
La tasho shaqaalaha iyo waalidiinta.
Bar carruurta yar yar si ay u taageeraan waxbarashadooda.
Waxay kor u qaaddaa akhriska raaxo.
Waxay abaabushaa barnaamijyo dhiirrigelin leh.
Waxay ku dheereeysaa barashada wax qabadyada kobcinta.
Waalidku waxay ka diiwaan gelin karaan carruurtooda Xarunta Adeegga Degmadda waqti kasta oo sanadka gudihiis ah. Waxaan ku dhiirigelinaa waalidiinta inay soo booqdaan dugsiga shakhsi ahaan isla markaana ay keenaan carruurtooda, si aan u siin karno qof walba soo dhaweyn diiran iyo booqasho dugsiga. Haddii booqasho shakhsi ah aysan ku habooneyn, foomamka waa la soo diri karaa. Saacadaha xafiiska iskuulka waa 7:15 subaxnimo ilaa 4 galabnimo
Sanad dugsiyeedka Minnetonka waxaa loo qaybiyaa afar meelood. Kaararka warbixinta ayaa elektiroonig ahaan loo heli karaa dhammaadka rubuc kasta. Kaarka warbixinta waxaa ku jira horumarka ilmaha oo dhan, oo ay ku jiraan horumarka xagga aqoonta, dhaqanka, dadaalka, iyo caadooyinka. Sidoo kale lagu daro kaarka warbixinta waa macluumaadka imaanshaha.
Waalidnimada qolka waa fursad aad u fiican inaad ku barato ardayda kale ee fasalka ubadkaaga, macalinka iyo inaad ku lug yeelato nolosha dugsiga ilmahaaga. Waxaad ku tabaruci kartaa mid ama dhammaan fasalada ilmahaaga. Fadlan la xiriir macallinka cunuggaaga haddii aad xiisaynayso inaad noqoto waalid hoggaamiye qol ah, waalid qol ama caawiye ah.
Masuuliyadaha Hogaanka ee Hogaanka Hogaanka: waajibaadku way ku kala duwan yihiin macalimiinta Guud ahaan xiriiriyaha ugu weyn ee macallinka, mas'uul ka noqo lacagta xafladaha fasalka, ka caawi qorsheynta xafladaha iyo ka caawinta howlaha kala duwan.
Waajibaadka Waalidka Qolka: waajibaadyadu way ku kala duwan yihiin macallimiinta. Guud ahaan ka caawi dhinacyada qorsheynta, noqo xiriir u dhexeeya macallinka iyo waalidiinta oo ka caawi howlaha kala duwan.
Waajibaadka Caawiyaha Qolka: waajibaadka way kala duwan yihiin macallimiinta. Guud ahaan ka caawi macallinka mashaariicda, ka caawiya dhinacyada.
Helitaanka Qoyska ee Skyward
Heerkulka Barafka iyo Qabow
Adeegyada Hadalka iyo Luqadda
Tababbarka dabka waxaa la qabtaa sanadka gudihiisa si loogu sameeyo ka bixitaan deg deg ah oo dhismaha ah nidaam caadi ah. Fasal walba waxaa ku yaal khariidado muujinaya jidka loo maro banaanka.
Dawooyinka Qufulka-u-xidhan ayaa la qabtaa 5 jeer sannad dugsiyeedka oo dhan.
Dalool digaag waxaa la qabtaa sanad walba bisha Abriil.
Horraantii sannad dugsiyeedka waxaa la qabanayaa shaqo-ka-bixida baska.
Golaha Iskuulka Minnetonka wuxuu dejiyaa siyaasadaha waxbarashada iyo miisaaniyadaha dhamaan iskuulada Minnetonka. Guddigu wuxuu kulmaa 7da fiidnimo maalin kasta iyo khamiista koowaad ee bisha, sida caadiga ah Xarunta Adeegga, 5621 County Road 101, Minnetonka, MN.
Dadweynaha ayaa lagu soo dhoweynayaa dhamaan kulamada. Madasha furan waxay hogaamineysaa kulanka koowaad ee bisha. Inta lagu jiro kulanka furan, dadweynaha waa la soo dhaweynayaa inay kala hadlaan xubnaha guddiga wixii ku saabsan arrimaha la xiriira waxbarashada ama iskuulada maxalliga ah. Booqo bogga bogga Guddiga Iskuulka si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Haddii ay dhacdo in iskuulku u baahdo in la buriyo ama dib loo dhigo, waxaad ka heli doontaa farriin otomaatig ah lambar kasta oo taleefan ah oo ku yaal feyl dugsiga. Waxa kale oo aad dhagaysan kartaa WCCO-AM (830) iyo KSTP-AM (1500) oo ku saabsan shaacinta xidhitaanka dugsiga ama bilowga daaha.
Waa muhiim, sidoo kale, in adiga iyo ilmahaagu aad wada leedihiin qorshe haddii dugsiga laga eryo goor hore sababta oo ah duufaanta soo socota ama korantada oo go'da. Qorshuhu wuxuu noqon karaa inuu tago guriga dariska loo qoondeeyay. Qorshahan ayaa laga yaabaa inuu noqdo mid lama huraan ah haddii si qarsoodi ah lagugu hayo magaalada dhexdeeda ama aad la kulanto xaalad degdeg ah oo aadan guriga ku soo noqon karin cunuggaaga hortiisa. Hubso in ilmahaagu ogyahay meesha uu aadayo hadaadan guriga ahayn. Xafiiska dugsiga ayaa u soo diri doona guriga foom sanad kasta leh tilmaamo ku saabsan waxa dugsigu ku samayn doono cunuggaaga haddii ay dhacdo iskuulkii hore ee lama filaanka ah.
Schoology waa ilaha tooska ah ee loogu talagalay dhammaan qoysaska ku nool Degmadda Iskuulka Minnetonka. Canug walba wuxuu heli doonaa galitaan gaar ah iyo eray sir ah si uu u galo nidaamka bilowga sanad dugsiyeedka degmada. Schoology waxaa ku jira macluumaad ku saabsan fasalada ilmahaagu ku qoran yahay, macluumaadka meelaynta, wararka fasalka iyo sawirada (adeegsiga ayaa ku kala duwan macallinka) iyo xiriiriyeyaasha ilaha waaweyn ee bogagga internetka ee waxbarashada.
Skyward waa barnaamij khadka tooska ah loogu talagalay dhammaan waalidiinta / mas'uuliyiinta degmada Iskuullada Minnetonka. Waalid walbaa waxay heshaan furaha furaha iyo lambarka sirta si ay u galaan Skyward bilowga sanad walba.
Skyward wuxuu ku siinayaa inaad marin u hesho:
Cunuggaaga / ubadkaaga macluumaadkiisa caafimaad iyo caafimaad
Macluumaadka xiriirka ee waalidiinta
Macluumaadka Adeegga Cunnada
Buundooyinka Imtixaanka iyo buugga fasalka (loogu talagalay heerarka Dugsiga Dhexe iyo Sare)
Waxaad ka gali kartaa Skyward websaydhka adoo gujinaya My SSO dusha sare ee bog kasta.
Ardayda loo yaqaan '' Springs Springs 'waxay ardayda ku qaataan ilaa 25 daqiiqo garoonka ciyaaraha maalin kasta oo dugsi ah. Waxa kaliya ee ka reeban waa marka dabaysha qabow ama heerkulka dhabta ahi yahay -10 ama qabow. Fadlan hubso in ilmahaagu si fiican ugu labbisan yahay jawiga.
Adeegyada shaqada bulshada waxaa loo habeeyay xoojinta xiriirka ka dhexeeya dugsiga, guriga iyo bulshada. Adoo la tashanaya waalidiinta iyo shaqaalaha iskuulka, Shaqaalaha Bulshada ee iskuulka ayaa kaa caawin kara qiimeynta baahiyaha gaarka ah ee ardayga iyo isku duwida dadaallada si qoyska iyo iskuulku ay u siiyaan ardayga jihayn joogto ah iyo barnaamij barnaamij. Howlaha waxaa ka mid ah, laakiin kuma eka:
Wadashaqeynta ardayda, waalidiinta, shaqaalaha si loo hirgaliyo faragalinta hore iyo istiraatiijiyadaha taageerada ardayda.
Bixinta waxbarashada waalidka iyo ilaha ardayda iyo qoysaska sidii loogu baahdo.
U doodida carruurta iyo qoysaska.
In la baro casharrada fasalka si looga hadlo baahiyaha gaarka ah ee ka dhex jira fasalka gudihiisa sida ay barayaashu codsadeen.
La shaqeynta waalidiinta iyo ardayda marka ay jiraan arrimo la xiriira isbeddelada qoyska.
Fududeynta kooxo yaryar sida Isbeddelada Qoyska, Saaxiibtinimada, Soogalootiga, Kooxda Dhaqamada Kala duwan ee carruurta leh.
Uruurinta taariikhda qoyska si loogu diyaariyo shirarka Shaqaaleynta Waxbarashada Gaarka ah.
La tashiga Kooxda Daraasaadka Caruurta iyo siinta adeegyo toos ah ardayda waxbarashada gaarka ah.
Haddii macallimiinta iyo / ama waalidku aamminsan yihiin in ardaygu yeelan karo naafo waxbarasho ama naafo ah, cunuggaas waa in la qiimeeyaa si loo arko haddii isaga / iyada ay ubaahantahay adeegyada waxbarashada gaarka ah. Tijaabooyin ama adeeg lama bixin karo iyadoon waalidku oggolaan. Natiijooyinka imtixaanka waxaa had iyo jeer lala wadaagaa waalidiinta iyo waalidiinta oo la wadaaga qorshaha ardayga. Adeegyadan waxbarashadda qaaska ah waxaa lagu bixiyaa Iskuullada Minnetonka: barnaamijka barbaarinta carruurta, fasalka koriinka, barnaamijka naafonimada barashada, daaweynta hadalka iyo luqadda, waxbarashada naafada ah ee maskaxda wax lagu baranayo, barnaamijka jimicsiga jirka ee la-waafajiyay iyo barnaamijka cilaaqaadka dabeecadda (EBD).
Markay ardaydu ku adkaato inay ku wada xiriiraan, qiimayno ayaa loo samayn karaa si loo ogaado haddii ardaydu u qalmaan Adeegyada Hadalka iyo Luqadda.
Meelaha isgaarsiinta ee la qiimeeyay waxaa ka mid ah: qeexitaan, luqad, cod iyo faseexnimo. Adeegyadan qaaska ah waxaa la siiyaa carruurta u baahan kara ka caawinta soosaarista dhawaqyada saxda ah ee hadalka, kuwa u baahan ereybixinta / naxwaha / fahamka iyo taageerada hadalka muujinta, kuwa baranaaya in ay bartaan dhawaaqyada hadalka, iyo carruurta u baahan wax barista iyo ku celcelinta sidii loo xakameyn lahaa soosaarayaasha codkooda.
Adeegyada hadalka iyo luqadda ayaa loo heli karaa shaqsiyaadka min dhalasho ilaa 21 sano jir dhammaan iskuulada Minnetonka ee laga helo Ruqsada Hadalka Waxbarashada iyo Aqoonyahanada Luqadda.
Macallimiintu waxay bilaabi doonaan inay soo saaraan liisaska fasalka ee sannad dugsiyeedka soo socda ee Maajo. Qurxinta fasalka waa tallaabo muhiim u ah qorshaynta waxbarashada ilmahaaga. Macallimiintu waxay adeegsadaan dhowr shuruudood oo ay dhigayaan ardayda si ay ugu abuuraan xaalad waxbarasho ku habboon ardayda oo dhan. Liiska soosocda ee soo socdaa waxaay iftiimineysaa qaar ka mid ah shuruudaha:
Isu-dheellitirka fasalka ee ragga iyo haweenka.
Ardayda hibada leh ee kooxaha hibada leh isla markaana koox koox gaar ah gaadhsiiyey.
Isbarbardhigaya baahiyaha ardayda waxbarashadda gaarka ah, qaabka macallinka iyo kiis-kicinta
Faafidda awooda ayaa u dhexeysa qolkasta oo guri ah.
Shaqsiyada ardayga ee u dhigma.
Codsiyada waalidka ee ku saleysan duruufaha gaarka ah ama walaacyada.
Ma ahan danta ugu wanaagsan ardayda oo dhan in la horumariyo liisaska fasalka iyadoo lagu saleynayo oo keliya codsiyada waalidiinta ee macallinka gaarka ah. Si taas loo sameeyo waxay dhimaysaa shuruudaha kale ee muhiimka ah iyo isku darka guud ee fasalka. Foomamka Codsiga Waalidnimada ayaa laga heli karaa xafiiska haddii waalidku doonayaan inay la xiriiraan baahiyaha gaarka ah ee ilmahooda iyo qaababka barashada.
Laba-saac Saacadda Soo-noqoshada
Haddii aan ku dhawaaqno “laba saac oo daahitaan ah” oo micnaheedu yahay in baska ilmahaagu uu soo bixi doono 2 saacadood oo soo daaho. Iskuulku wuxuu dhamaan doonaa waqtiga caadiga ah.
Barnaamijka Imtixaanaadka iyo Qiimeynta Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka wuxuu ku daraa imtixaanka gobolka oo dhan, imtixaan heerar hoose ah, iyo meeleynta fasalka iyo indho indhaynta si loo bixiyo muuqaal dhammaystiran ee ardayda iyo awoodaha manhajka iyo daciifnimada. Marka la barbar dhigo labadaba caadooyinka qaranka iyo natiijooyinka imtixaanka gobolka oo dhan, ardayda Minnetonka ardayda si wanaagsan ayey u gudanayaan.
Qiimaynta Buuxda ee Minnesota
MCA waa qiimeyn ay qaadaan ardayda reer Minnesota gu'ga ee sannad kasta kaasoo siiya waalidiinta, barayaasha, maamulayaasha, iyo mas'uuliyiinta waxbarashada gobolka calaamad u ah sida ay ardaydu ugu shaqeynayaan xisaabta, akhriska iyo sayniska. Tani waxay noo oggolaaneysaa dhammaan qiimeyn sax ah oo ku saabsan sida ardaydeena ay u fulinayaan waxayna na siineysaa fursad aan ku qaadno tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah hagaajinta guusha ardayda.
Ardayda Minnetonka ah ee fasalada K - 8 waxay ka qeybqaataan imtixaanada Degmooyinka oo dhan inta lagu jiro deyrta iyo guga. Imtixaannada dayrta ayaa cabbiraya waxa carruurtu horay u yaqaaneen xisaabta iyo akhriska iyo waxa ilmuhu weli u baahan yahay inuu barto. Imtixaanada guga waxay qiimeeyaan cunug kasto koriinkiisa inta lagu gudajiro sanadka.
Ardaydu waxay imtixaanka ku galaan kombiyuuter. Su'aalaha waxay si otomaatig ah ula jaan qaadayaan heerka waxbarasho ee ku habboon ubadka, iyadoo lagu saleynayo jawaabaha ilmaha. Asal ahaan, imtixaan kasta waxaa loo habeeyay ardayga si loo ogaado heerka waxbarasho ee ku habboon arday kasta. Ardayda caado ahaan u helay qiimeynta heerka caadiga ah inay aad u adag yihiin, oo markaa jahwareer badan, waxay helaan dheelitirka ka sii fiican ee su'aalaha raaxada leh iyo kuwa adag. Ardayda caadiyan ku dhibtooday qiimeynta caadiga ah waxay helaan su'aalo adag. Nidaamkan imtixaanka, ardayda kartida sare waxay u ogaadaan inaysan jirin saqaf macmal ah oo lagu tijaabinayo hanashada waxbarashadooda.
Tikniyoolajiyadani waxay u oggolaaneysaa koritaanka waxbarasho ee ardayga in loo qiyaaso si hufan oo hufan. Qiimayntu way ka gaaban yihiin qiimeynta caadiga ah ee caadiga ah waxayna isticmaalaan waqti fasal ka yar iyagoo wali helayaan macluumaad faahfaahsan, sax ah oo ku saabsan awooda tacliimeed ee cunuggaaga iyo koritaankiisa. Ilmo kastaa wuxuu ku isticmaalaa ugu yaraan saddex saacadood sheybaarka kumbuyuutarka inuu dhameystiro qiimeyntan inta lagu gudajiray saddaxda toddobaad ee daaqadda. Qiimaynta kadib, waalidiinta waxaa la siiyaa warbixin muujineysa heerka gundhigga ubadkooda ee deyrtan. Imtixaanada ku xiga (guga iyo dayr kasta), waalidiinta waxay sidoo kale arki doonaan dhibco koritaan ah oo ka caawiya la socodka haddii cunug kastaa uu ku guuleysto kobaca sanadka ee sanadka. Warbixin kastaa waxay waliba bixisaa isugeyn dhibco ah ee la xiriirta heerka heerka fasalka iyo dhibcaha Lexile.
Natiijooyinka labadan imtixaan ee cunuggaaga waxaa lagula wadaagi doonaa shirarka waalidka / macallinka ama waxaa guriga loogu soo diri doonaa boostada. Waxa kale oo aad ka heli kartaa iyaga oo u maraya dhinaca Skyward Family Access.
Macallimiinta Minnetonka waxay sidoo kale qiimeeyaan akhriska iyo farshaxanka luqadda oo ay la socdaan:
Tijaabada Benchmark deyrta, jiilaalka iyo guga.
Macallimiintu waxay u adeegsadaan qalab kaladuwan oo kaladuwan oo kaladuwan. Imtixaannada, indha indheynta ardayda, is-qiimaynta, xaashiyaha qiimeynta shaqsiyeed iyo wareysiyada, shaqada kooxda, samballada shaqada, liistada xirfadaha, iyo faylalka ayaa ka mid ah aaladaha qiimeynta ee la adeegsaday.
Ku Soo Booqo Ilmahaaga Iskuulka
Si loo badbaadiyo dhammaan carruurta iyo shaqaalaha dugsigeenna, dhammaan booqdeyaasha iyo waalidiinta waxaa laga rabaa inay soo galaan oo ka baxaan xafiiska oo ay xirtaan astaanta booqdeyaasha inta ay ku jiraan dhismaha.
Waalidiintu waa ku soo dhaweynayaan inay soo booqdaan fasaladooda ama ay qado ku qaataan dugsiga. Fadlan wac subaxdii aad rabto inaad soo booqato si aad uga hubiso macallinka ilmahaaga. Boos celinta qadada waa in la sameeyaa 10 subaxnimo
Waxaan ku faraxsanahay inaan helno gargaarka, taageerada iyo joogitaanka waalidiinta iskaa wax u qabso ah. Si loo bixiyo deegaan nabadgelyo leh, oo carruurtu ay tahay ahmiyadeena koowaad, waxaan u baahan nahay inaan u hogaansanno nidaamka soo socda:
Habka Galitaanka: Waa lama huraan in dhamaan tabaruceyaasha ku jira dhismaha ay saxeexaan oo ay isticmaalaan calaamadaha booqdaha ee uu dugsigu bixiyo.
Qarsoodinimada: Barayaashu waxay gartaan muhimadda sirta. Qof kastaa wuxuu ku aamin san yahay bey'ad lagu ilaalin karo asturnaanta ilmaha iyo qoyska ilmaha. Waxaan ka fileynaa isku kalsooni isku mid ah sirta qarsoon ee tabaruceyaashayada sida aan annaguba nafteena ka sugno.
KA QAYB QAADASHADA CLASSROOM
Waalidiinta waxaa lagu dhiirigelinayaa inay ku tabarucaan fasalka carruurtooda. Macallimiintu caadi ahaan waxay yeelan doonaan fursado iskaa wax u qabso ah oo fasalka ah oo laga heli karo Manhajka Manhajka waxayna la xiriiri doonaan baahiyaha kale ee iskaa wax u qabso ah sanadka oo dhan.
FURSADAHA SHAQADA - PTO
Waxaan leenahay dhaqan xoog leh oo iskaa wax u qabso ah oo ku yaal Clear Springs. Waaliddiinta, daryeelayaasha, iyo xubnaha qoyska ayaa ku lug leh dhinacyo badan oo waxbarashada carruurteenna. Waxaan rajeyneynaa waalid kasta inuu heli karo ugu yaraan hal wado oo lagu caawiyo sanadkasta. Dhamaan fursadaha iskaa wax u qabso ee PTO (oo lagu sharraxayo) waxaa lagu dhajiyay websaydhka bilowga sanad dugsiyeed kasta. Waad gali kartaa oo iska qori kartaa fursadahaan sanadka oo dhan. Kombiyuutarradu waxaa lagu diyaariyey maktabada dugsiga inta lagu jiro Habeennada Manhajka ee aad u istcimaasho inaad isqorto, sidoo kale. Sanadka oo dhan, guddiyado kala duwan ayaa waliba u diri kara foomamka codsi iskaa wax u qabso ee ku yaal Jumlada Jimcaha.
Dhammaan hubka iyo walxaha, oo leh muuqaal hub, waa ka mamnuuc dhammaan bay'adda dugsiga iyo meel kasta oo u dhow garoonka dugsiga. Fadlan ka eeg qaybta Anshaxa macluumaad dheeraad ah.
Xylophones, Yaks iyo Zephyrs
Hagaag, runtii macluumaad kama hayno Xylophones, Yaks iyo Zephyrs. Waxaan dooneynay inaan dhameysano alifbeelkeena!
Waad ku mahadsantahay aqrinta Hagayaasha Waalidkeena! Fadlan la xiriir xafiiskayaga ugu weyn haddii aad wax su'aalo ah qabtid.
Nadiifi Springs Elementary /